उमेर अनुसार कति यौन सम्पर्क राख्ने जान्नुहोस् ! [सामान्य गल्तीले जान सक्छ ज्यान] – aajnepal
HomeHealthउमेर अनुसार कति यौन सम्पर्क राख्ने जान्नुहोस् ! [सामान्य गल्तीले जान सक्छ ज्यान]
February 1, 2019 aajnepal Health 0
काठमाडौं । यौन सम्बन्ध कति पटक राख्ने ? यो सामान्यतया सोधिने प्रश्न होईन तर उमेर पुगेका व्यक्तिहरुले जान्न जरुरी भने अवश्य छ । यौनसम्पर्क मानिसको रुचि र क्षमतामा भर पर्ला । तर एक अध्ययनले मानिसले कति पटकसम्म सेक्स गर्नुपर्छ भनेर निकालेको केही निश्कर्षको बारेमा यहाँ चर्चा गरिदैछ ।
किन्जी इन्स्टिच्यूट अफ रिसर्च इन सेक्स, रिप्रोक्डशन एन्ड जेन्डरले वर्षभरिमा कति पटक सेक्स गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर एक अध्ययन गरेको थियो जसको परिणाम निकै रोचक छ । अध्ययनमा १८ देखि २९ वर्षसम्म मानिसले वर्षमा औसत ११२ पटकसम्म यौन सम्पर्क राख्छन् ।
यस्तै ३० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका मानिसले वर्षमा औसत ८६ पटक सेक्स गर्ने गरेको पाइयो भने ४० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका मानिसले वर्षमा ६९ पटक सेक्स गरेको पाइयो । विवाह पछिको नतिजा अचम्मको कुरा यो थियो की १३ प्रतिशत नवविवाहिता जोडी यस्ता थिए जसले वर्षभरि मै सेक्स गर्न कम गरि सकेका थिए । त्यस्तै ४५ प्रतिशत दम्पतीले महिनामा कहिलेकाही मात्रै सेक्स गर्ने गरेका थिए । विवाहपछि सेक्सको “फ्रिक्वेन्सी” कम हुनुको कारण जिम्मेवारी बढ्नु पनि हो ।
जस्तैस् हेक्टिक वर्क सेड्युल, घरको काम आदि । याक्सपर्टसका अनुसार उमेर बढ्नुको साथै मानिसमा रोगले पनि आक्रमण गर्न थाल्छ जसले सेक्सप्रतिको इच्छा कम हुँदै जान्छ । ३४ प्रतिशत मानिसले सातामा दुईदेखि तीन पटकसम्म सेक्स गरेको स्विकारे । सात प्रतिशतले सातामा चारदेखि पाँच पटकसम्म सेक्स गर्न रुचाउँथे । एजेन्सी